कुलमान घिसिङको लोकप्रियता तानातान! अब के गर्दा राम्रो हुन्छ? – Newsharpal24
January 7, 2021 adminLeaveaComment on कुलमान घिसिङको लोकप्रियता तानातान! अब के गर्दा राम्रो हुन्छ?
काठमाडौं । मुलुकलाई उज्यालो दिने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन्, कुलमान घिसिङ । १८ घण्टाभन्दा बढी लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो दिएका कुलमान जति शासकको अप्रिय छन्, त्यत्ति नै जनताको प्रिय र पूज्य छन् ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानको निरन्तरता बहुसंख्यक नेपालीले चाहेका थिए । तर, उनलाई राज्यले दोहोर्याएन र उनको स्थानमा पदपूर्ति पनि गरिएको छैन, जस कारण कुलमानको प्राधिकरण यात्रा अझै सम्भावना रहेको धेरैले झिनो आशा गरेको पाइन्छ ।
उनी फेरि प्राधिकरणको नेतृत्व लिन जालान् वा नजालान् यो भविष्यमा थाहा हुने नै भयो । तर, अहिले कुलमानको योगदानको जस लिन नेताहरुको हानाथाप देखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यमा कुलमानको मात्रै हात रहेको होइन, प्राधिकरणका समग्र कर्मचारी, तालुक मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्री तथा सिङ्गो राज्य प्रणालीकै सहयोग रहेको स्वयं कुलमानले स्वीकारेका छन् ।तर, तत्काल लोडसेडिङ अन्त्य नहुने, लोडसेडिङ हटाउन वर्षाैं लाग्ने प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखदेखि जलविद्युत विज्ञहरुको भनाइ विपरीत कुलमानले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै सदाको लागि अन्धकार हटाएको यथार्थले नेपालीको मन जित्न सफल भयो ।
२०७३ भदौं ३१ गते प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका कुलमानले सोही वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनबाट लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान थालेका थिए । र २०७७ भदौ ३० गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कुलमान घर फर्किंदै गर्दा लोडसेडिङ नेपालीले बिर्सिसकेका थिए । उनको बिदाइसँगै आक्कलझुक्कल बत्ति जाँदा कतै फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका भने पैदा गराइरहेको छ । प्राधिकरणमा २६ वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाएका कुलमान नेपाली जनताको प्रिय र पूज्य पात्र हुन् ।
मुलुक निर्वाचनको बाटोमा अघि बढिरहँदा कुलमानलाई आफूले ल्याएको, दोहो¥याउन चाहेको नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अर्थात कुलमानलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन थालिएको छ । कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिँदा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए । लोडसेडिङ हटाउने क्रममा प्राधिकरणको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका शर्माले जस पाउनु स्वभाविकै हो ।तर, पूर्ववर्ती मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि जस खोजिरहेका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन आफ्नो ठूलो हात रहेको रायमाझी दाबी गर्दै आएका छन् ।
कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन आफूले सबै तयारी पूरा गरेकै बेला सरकार परिवर्तन भएको रायमाझीको दाबी छ । पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी थिए । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै रायमाझी पनि ऊर्जा मन्त्रीबाट हटे । पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भए । जनार्दन शर्माकै पालामा कुलमान प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भए । यतिमात्रै होइन सरकारमा छँदा कुलमानकाबारे चुइँक्क नबोलेका पूर्व ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अहिले उनै कुलमानलाई प्राधिकरणमा दोहो¥याउन चाहेको बताउन थालेका छन् ।
Tagged Kulmaan ghisingNews